Ulwakhiwo Steel, Ulwakhiwo Steel Design, basarha House - Joyina
Prefabs Light Steel House
steel Light abahlala indlu
yokwakha isakhiwo Steel
steel Pre isakhiwo yokugcina
Metal Warehouse Structure Steel Building
iqela Strong technical
I Joyina iqela zobugcisa kuye iminyaka yamava kolu shishino, kunye namava ngamandla zobugcisa nobungcali. kwizinga lethu uyilo olugqwesileyo kunye nemigangatho kuvumela kulwenziwo ezikumgangatho ophezulu, uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-ukusebenza, izixhobo ekrelekrele.
Joyina i iimveliso kwizinga eliphezulu, imigangatho yokuvelisa, kunye nenkonzo umxhasi bafumene isikhundla sethu ibe yinkokeli shishini. Ukuqinisekisa lo mgangatho kuqhubeka ukuba kufikelelwe, iiofisi zamasebe kunye abasasazi ziye ngobuchule ukuseka umgaqo-lonke China.
Yeyona Joyina nokuzibophelela kwinkonzo lwabathengi ebalaseleyo eqinisekisa ukuba zombini phambi nasemva ukuthengiswa kweenkonzo kunye nemfundo ziya kubonelelwa ukukunceda ukwazi nokusebenzisa iimveliso zethu ngokukhawuleza ngakumbi ndikunyibilikise ngokufezekileyo.
Ifunyanwa e Qingdao, Joyina iqela kwiintengiso mveliso sithembele kwinkqubo emanyanisiweyo yolawulo enika inkonzo zonke ngeenxa kubaxumi, ukusuka pre-kwintengiso kwinkonzo post-ukuthengiswa. Le nkampani inkampani, Qing Dao Joyina Ulwakhiwo Steel Co., Ltd, inika inkonzo ukujika-ezingundoqo kwisakhiwo Steel lemveliso ukusetyenziswa kwimizi-mveliso, izakhiwo Agri-value, kunye nezindlu Pre-abunjiiweyo ngenxa ngamafa zabucala. Iinjineli ebalaseleyo, ibekwe-ofisi yethu headquarter Shanghai, ukulawula kumasifundisane kungamampunge nokubonelela ngenkonzo jika-ezingundoqo kubathengi bethu.
Ulwakhiwo Steel Building for workshop
Light Ulwakhiwo Steel Living House
Steel prefabs Chicken House In yenkukhu Farm
Qingdao Joyina Ulwakhiwo Steel Co., Ltd.
TEC Talks: Eyokugqibela In yenkukhu Technolo ...
"Inyama yenkukhu Industry Ngaba Yenza 30,000 ...